राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै, बोलकबाेल कहिले ? - Arthasansar
राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै, बोलकबाेल कहिले ?
शनिबार, २० भदौ २०७७, ०७ : ११ मा प्रकाशित
अर्थ संसार, काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले १४ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले एक सूचनामार्फत ९१ दिन र ३६४ दिनको लागि उक्त रकम बराबरकाे ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागिएकाे जनाएकाे छ ।
बैंकले ९१ दिनकाे अवधिका लागि १२ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्नेछ । बोलकबोल प्रक्रियाका माध्यमबाट जारी गर्न लागिएको उक्त ट्रेजरी बिल २०७७ साल मंसिर २३ गते परिपक्क हुनेछ । यस्तै, बैंकले ३६४ दिनको अवधिका लागि २ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्नेछ । उक्त ट्रेजरी बिल २०७८ साल भाद्र २२ गते परिपक्क हुनेछ ।
भाद्र २२ गते, साेमबार ३ बजे बोलकबाेल भएर भाद्र २३ गते, मंगलबार ट्रेजरी बिल बिक्री हुने बैंकले जनाएको छ ।